Okokufundisa Nama-Manuwali we-iPhone | Izindaba ze-IPhone
Ku-iPhone ye-Actualidad sizokusiza ukuthi uzuze kakhulu efonini yakho ye-Apple noma ngabe umusha kulolo daba futhi ungazi ukuthi uzoqala kuphi. Esandleni sakho uzoba nakho konke ukuqoqwa kwemanyuwali kanye nokufundiswa lokho kuzokufundisa, igxathu negxathu nemifanekiso, okufanele ukwenze noma ngabe sikhuluma ngeJailbreak, i-iOS noma olunye udaba. Kwezinye izimo uzothola nokufundiswa kwamavidiyo ephelele ngokuphelele ukuze ungalahlekelwa imininingwane yokuthi wenzeni.
Amadivaysi eselula, kungakhathaliseki ukuthi i-iPhone, i-iPad nanoma yiluphi olunye uhlobo, angakwazi ukufinyeleleka kwabancane...
Ungayisebenzisa kanjani i-Reactions ku-WhatsApp
Por ULuis Padilla kwenza Amaviki angu-3 .
I-WhatsApp isivele yethule ukusebenza kwayo okusha okukuvumela ukuthi uphendule imilayezo ethunyelwa kuwe ngaphandle kokuthi ubhale…
Por UMiguel Hernandez kwenza Amaviki angu-4 .
Sekudlule isikhathi esingaphezu konyaka kwethulwa ngokusemthethweni i-AirTag futhi abanye abasebenzisi sebeqalile ukungabaza...
Kungani izithonjana zingabonakali ku-iPhone yami?
Kulesi sihloko sizokukhombisa izizathu zokuthi kungani izithonjana zingaveli ku-iPhone. Izithonjana ziyi...
Ungalithuthukisa kanjani ibhethri lakho le-MagSafe ukuze lishaje i-iPhone yakho ngokushesha
I-Apple ikhiphe isibuyekezo sebhethri layo le-MagSafe ngento entsha yokuthi manje amandla okushaja ase...
Ungaluphatha kanjani uphawu lwendawo oluvela ku-iPhone yakho
Impela ubonile ukuthi uphawu lwendawo luvela ngezikhathi ezithile phezulu kwe-iPhone yakho,…
Ungashintsha kanjani izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinyanga ze-2 .
Ukushintsha izithonjana zezinhlelo zokusebenza ku-iPhone kusivumela ukuthi sinikeze ukuthinta komuntu siqu ku-iPhone yethu ukuthi,…
Ungazivala kanjani izaziso ku-iPhone
Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungazivala kanjani izaziso ku-iPhone, i-iPad ne-iPod touch. Izaziso...
Iyini i-AirDrop nokuthi ungayithola kanjani okuningi kuyo
Uma usanda kukhipha i-iPhone noma i-iPad entsha, mhlawumbe uke wazibuza ukuthi iyini i-AirDrop. Kuphinde kube…
Ungafometha kanjani i-iPhone yakho
Por UMiguel Hernandez kwenza Izinyanga ze-2 .
I-iPhone yakho, naphezu kokuthi iwumkhiqizo onesofthiwe nehadiwe ezihamba ndawonye...
Ungazidlulisa kanjani izingxoxo ze-WhatsApp kusuka ku-iPhone ziye ku-Android noma okuphambene nalokho
Ungayisetha kanjani kabusha noma uyiqale kabusha i-iPhone X entsha ngezinyathelo ezintathu ezilula
Ungayibuyisela kanjani imifanekiso ye-iPhone?
Ungayishintsha kanjani noma uyenze ingasebenzi iPIN yeSIM khadi ku-iOS 12
Ungayicisha kanjani i-iPhone yami
Ungasho kanjani ukuthi i-iPhone yakho isha, ivuselelwe, yangokwezifiso, noma iyashintshwa
Ungawabheka kanjani amaphasiwedi wakho agcinwe ku-iPhone
Ungangenisa kanjani izithombe kusuka ku-iPhone ziye ku-Hard Drive yangaphandle usebenzisa iMac
Ungavumelanisa kanjani amakhalenda we-iCloud neGoogle kalula
Ungayicisha kanjani, uyiqale kabusha noma uyivuse i-iPhone X
Ungakhansela kanjani okubhaliselwe kwakho kusuka ku-iPhone yakho, i-iPad noma i-iTunes
Ungadlulisa kanjani ukuncenceza ku-iPhone kusuka ku-iTunes 12.7